Htake Htar Myat's Likes - Myanmar Network
Htake Htar Myat's Likes
Back to Htake Htar Myat's Page
ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် ရုံး/ကျောင်းချိန်လွတ် SU… ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် အတွေ့အကြုံရှိ ဗြိတိသျှကောင်စီဆရာ/ဆရာမများမှ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည့် ရုံး/ကျောင်းချိန်လွတ် SUNDAY အတန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ British Council Teaching Centre တွင… Discussion ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် ရုံး/ကျောင်းချိန်လွတ် SU… 46 Likes
အမှန်တရားကို စူးစမ်းကြည့်မိခြင်း ကွာလာလမ်ပူမှာ ကျင်းပသွားတဲ့ အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် နှလုံးလှ စာပေဟောပြောပွဲ မှတ်တမ်းအကျဉ်းကို ရေးရင်း တွေ့ကြုံခဲ့တာတွေ၊ တွေးမိတာလေးတွေကို စာတပုဒ်ရေးချင်လာ ပါတယ်။ အချိန်တွေပိုနေလို့ မဟုတ်ပေမဲ့ မြင်… Discussion အမှန်တရားကို စူးစမ်းကြည့်မိခြင်း 27 Likes
"စာပွခြင်း" ကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားရန် အကောင်းဆ… [Zawgyi] “စာပွခြင်း သည် အမေရိကန်စာရေးသားပုံ၏ ရောဂါပင်ဖြစ်သည်” လို့ William Zinsser က သူ၏ လက်ရာအမြောက်ဆုံး ဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ “On Writing Well” တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ဟာ မလိုအပ်သေ… Discussion "စာပွခြင်း" ကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားရန် အကောင်းဆ… 32 Likes
အင်္ဂလိပ်စာဘာကြောင့် မတတ်သေးတာလဲ ? ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ သူငယ်တန်းကဆယ်တန်း၊ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရတဲ့ အထိအင်္ဂလိပ်စာကို (၁၀) နှစ်ကျော် သင်ယူခဲ့ကြပြီးပြီ၊ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းပြီးတဲ့အထိအင်္ဂလိပ်စာကိုဟုတ်တိ၊ ပတ်တိသေသေချာချာတတ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကနည်းပါတယ… Discussion အင်္ဂလိပ်စာဘာကြောင့် မတတ်သေးတာလဲ ? 149 Likes
မှတ်တမ်းရေးပုံရေးနည်း မှတ်တမ်းရေးပုံရေးနည်း (How To Write A Memo) မှတ်တမ်း (memo) ဆိုတာ အတိတ်ကအရာတစ်ခုလားလို့တောင် ထင်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၄င်းနေရာမှ e-mail အမှာစာ (message) တွေ အစားထိုးဝင်ရောက်လာတာ ကြာလှပေါ့။ ဒါပေ… Discussion မှတ်တမ်းရေးပုံရေးနည်း 75 Likes
အာရှစီးပွားရေးများဆီက ကျွန်တော်တို့ယူနိုင်တဲ… အနောက်ကမ္ဘာဟာ ၂၀၀၈ ငွေကြေးပြဿနာမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေရချိန်မှာ များစွာက အာရှဘက်ဆီကို မနာ လိုဝန်တိုစွာ မျှော်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတာ သဘာဝကျပါတယ်။ အာရှ (ဂျပန်ကလွဲရင်) ရဲ့ ဒေသများစွာမှာတော့ စီးပွားရေး ပ… Discussion အာရှစီးပွားရေးများဆီက ကျွန်တော်တို့ယူနိုင်တဲ… 38 Likes
English for Hotel and Catering Industry (Uni… ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ လမ်းညွှန်ခြင်းကိုအဓိကလေ့လာသွားပါမယ်။ လမ်းညွှန်ရာမှာတည်နေရာကိုပြတဲ့ဝိဘတ်တွေ ဟာမသုံးမဖြစ်အရေးပါ တဲ့အတွက်သူတို့ကိုသေသေချာချာလေ့လာထားရပါမယ်။ လမ်းညွှန်ရာမှာသတိထားဖို့က ရည်ညွှန်းအမှတ်အသား re… Discussion English for Hotel and Catering Industry (Uni… 31 Likes
ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် တွေးကြမလဲ ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် တွေးကြမလဲ ဘာလို့ ထိထိရောက်ရောက် တွေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ ဆိုရင် အချိန်မရလို့ပါ .... ခေတ်ကြီးက အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြေးနေပြီ ... မှန်ဖို့သာမ က မြန်ဖို့ပါ လိုလာပြီ... ထိရောက် ဖို့… Discussion ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် တွေးကြမလဲ 125 Likes English for Hotel and Catering Industry (Uni… ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညွှန်ကြားပြောဆိုရာမှာပြောဆိုပုံ၊ ရှင်းပြပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ Unit 8 မှာတုန်းကတစ်ခါ instruction နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာခဲ့ပြီး… Discussion English for Hotel and Catering Industry (Uni… 20 Likes
အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုဖတ်မလဲ? အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုဖတ်မလဲ? အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရာတွင် Reading skill သည်အရးကြီးသောကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကား (Native Language) တွင်ပင်လျှင် စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ပျော်ရွင်ခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတရရှိနိုင်ခြင်… Discussion အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုဖတ်မလဲ? 42 Likes
အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းများ အပိုင်း (၂) ၀ါစင်္ဂ parts of speech လို့ အားလုံး တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သဘောတူ မသတ်မှတ်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေလည်း ရှိတယ်။ အချို့က အဲဒီစကားလုံးတွေကို ၀ါစင်္ဂ parts of speech လို့ မယူဆကြဘူး။ စိတ်ခံစားမှုကို ဖော်ပြတဲ့ အာမေဋိ… Discussion အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းများ အပိုင်း (၂) 22 Likes